Sida loogu raaxeysto xawaaraha badda, tilmaamaha maskaxda lagu hayo | Ragga Stylish
Doomaha dheereeya ee badda ku jira. Daryeelka iyo talooyinka
Paco Maria Garcia | | Waqtiyada firaaqada
Bad maaxiddu waa hawl aad u macaan. Ku raaxayso xawaaraha badda, adoo dareemaya neecaawda badda si buuxda wejigaaga, oo ay weheliyaan aromada badda ... Waxaa jira kuwa taas uun ugu nool.
Doonta iska leh masuuliyad weyn ayaa hortaala isaga. Sidoo kale waa maalgashi adag oo ay tahay in si taxaddar leh loo daryeelo si loo yareeyo kharashyada badan.
Amniga xawaaraha badda ku jira, marka la dhoofinayo, waa in markasta la soo hormariyo.
1 Xeeladaha qaarkood si aad u daryeesho doontaada iyo xawaaraha badda si nabdoon
1.1 Laba shay oo aasaasi ah oo had iyo goor la raaco
1.2 Kabtanka iyo doontiisu waa inay noqdaan hal unug
Xeeladaha qaarkood si aad u daryeesho doontaada iyo xawaaraha badda si nabdoon
Laba shay oo aasaasi ah oo had iyo goor la raaco
Sanduuqa qalabka wanaagsan iyo shaandhada shidaalka. Waa run in shidaalka maanta uu ka nadiifsan yahay (oo jawi ahaan u fiican).
Kabtanka iyo doontiisu waa inay noqdaan hal unug
Maamulaha guud waa inuu ka digtoonaadaa khataraha ka imaan kara taas oo macnaheedu noqon karo isbeddel kedis ah oo xagga hirarka ama jihada dabaysha ah. Si la mid ah, kaliya waxa dareenkaagu kaa qabsado waa inaad awood u yeelatid inaad ku aragto wax aan caadi ahayn hawlgalka doontaada.
Dhawaaq aan caadi ahayn Waxay tilmaami kartaa in matoorka biyaha uu qalalayo. Urta Taayirada laga yaabaa inuu asal ahaan ka soo jeedo qayb dabacsan, sida gariir lama filaan ah inta markabku socdo. Waxay sidoo kale waxtar u leeyihiin xayiraadda doonta.
Markay doonta ka baxsan tahay biyaha, waa in laga ilaaliyaa cadceedda. Falaadhaha Ultraviolet-ku waxay waxyeello u geystaan ​​laashka mootada.
Waxyaabaha dibnaha Aad ayey faa'iido u leeyihiin in la ilaaliyo biyaha oo ay ka ilaaliyaan bushimaha rakaabka ka hortagga cilladaha qorraxda, tallaabada barxadda cusbada iyo dabaysha.
Rakaabka doomaha ah waa inay cagahooda ku socdaan. Waxaa lagugula talinayaa inaad uga tagto kabaha caadiga ah xejinta, gaariga dhexdiisa ama meelkasta, laakiin waligaa ha dul saarin.
Ilaha sawirka: AliExpress ee Isbaanishka / Framepool
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Doomaha dheereeya ee badda ku jira. Daryeelka iyo talooyinka
Qaraxyadu waa inay xirtaan deyrta / jiilaalka
Qaabkee ayay ragga moodkoodu noqon doonaa dayrta sannadkan?